विष्णु पौडेल सिंहदरबारमा जग्गा प्लटिङ गर्दै छन् कि नारायणहिटीमा ? — Motivatenews.Com
विष्णु पौडेल सिंहदरबारमा जग्गा प्लटिङ गर्दै छन् कि नारायणहिटीमा ?
काठमाडौं – निर्वाचन परिणामले हामी कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा र कम्युनिस्टलाई सत्तामा पु(याएको झन्डै डेढ वर्ष भयो । यही वेला लोकतन्त्र दिवस पारेर नेपाली कांग्रेस जागरण अभियान गर्दै छ । धेरैलाई लाग्न सक्छ, यो जागरण अभियान एउटा राजनीतिक दलको जीवनमा भइरहने कार्यक्रम मात्र हो । यदि जागरण अभियानलाई यसरी बुझियो भने यसपटक गलत हुनेछ । डेढ वर्ष मात्र भयो, हामी प्रतिपक्षमा बसेको, अझ भनौँ, कम्युनिस्टले दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार चलाएको । जागरण अभियान त्यो पनि वैशाख ११ मै गर्नुको निश्चित उद्देश्य छ । यसबाट हामी प्रस्ट राजनीतिक मार्ग पनि दिन खोजिरहेका छौँ ।
लोकतन्त्र किन र कसका लागि ?
नेपाली नागरिकले ठूलो विश्वाससाथ कम्युनिस्टलाई मत दिएर सरकारमा पु(याएका थिए । विश्वभर कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा हुँदा नेपालमा भने निर्वाचनबाट कम्युनिस्ट दुईतिहाइ नजिक पुगे । केन्द्रमा मात्र होइन, सातमध्ये ६ प्रदेशका साथै बहुसंख्यक स्थानीय तहमा सुविधाको सरकार चलाइरहेका छन् । तर, नतिजा के रु केपी ओलीले शक्तिशाली सरकार चलाइरहँदा नेपाली जनताले के पाए रु
नेपालको लोकतन्त्र बलियो भयो कि कमजोर ? लेखाजोखा नगर्ने ? नागरिकले लोकतन्त्र दिवसमा सरकारलाई सोध्ने कि नसोध्ने ? निर्मलाका हत्यारा खोइ ? दुई सय ३३ किलो सुन कुन खोलाले बगायो ? बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने विष्णु पौडेलले अब सिंहदरबारमा जग्गा प्लटिङ गर्दै छन् कि नारायणहिटीमा ? यातायातको सिन्डिकेट किन हटेन ? काम नगर्ने कतिजना ठेकेदारलाई कारबाही गरियो ? समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई किन पक्राउ गर्न थालियो ? खोइ पानीजहाज र रेल ? यस्ता अनेक प्रश्न छन् नागरिकले सरकारलाई सोध्नुपर्ने । हामी प्रतिपक्ष भएकाले सबै प्रश्न जनतासँगै उभिएर गर्न चाहन्छौँ । जनतासँग सरकार डराउनुपर्ने, तर अहिलेको परिस्थिति उल्टो भएको छ । यहाँ सरकारसँग जनता डराइरहेका छन् ।
आफ्नै कमजोरी सुधार गर्न
यो जागरण अभियान सरकारलाई खबरदारी गर्न र उसका कमजोरी देखाउन मात्र होइन । हामीलाई लागेको छ, यो सरकार आगामी चार वर्षमा काण्डैकाण्ड, भ्रष्टाचार र बेथितिले गन्हाएर जनताको घर–दैलोमा जानै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । किनकि यो सरकारको जग नै झुटको सहारामा छ । नागरिकलाई धोका दिएर बनेको छ । तसर्थ हामी यो जागरण अभियानबाट विकल्पसहितको प्रस्ट मार्गचित्र राख्न चाहन्छौँ । हामीले यी सबै कुरा जनतासामु भनिरहँदा हाम्राबारे पनि भन्नेछौँ । पहिले माफी माग्नेछौँ ।
डेढ वर्ष प्रतिपक्षका रूपमा हामी प्रभावकारी हुन नसकेको सत्य हो । हामी पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाग्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनामा कांग्रेसले खेल्नुपर्ने जति भूमिका कमजोर देखिएकै हो । तर, भूमिका नै नखेलेको होइन । तसर्थ, यो जागरण अभियानमा हामी सरकारका कमजोरीका पहाड बोकेर मात्र जनतासामु जादैनौँ, सरकारले सिर्जना गरेको समस्या, त्यसको समाधान र विकल्पको प्रस्ट मार्गचित्रसहित जाँदै छौँ ।
ओलीमा शक्तिमोह किन ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजका दिनमा आफूलाई सर्वशक्तिमान सम्झिरहेका छन् । विपक्षी त टाढाको कुरा, आफ्नै पार्टीभित्रका सुझाबसमेत मान्न ओली तयार छैनन् । बरु एकपछि अर्को शक्ति आफूमातहत ल्याउन खोजिरहेका छन् । दुईतिहाइको सरकारलाई के अभाव भयो र शक्ति प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउन खोजिँदै छ रु सेनासमेत प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा किन चलाउन खोजिएको छ रु यसरी शक्ति थुपार्नुको पछाडि कतै केपी ओलीको अनुहारभित्र ज्ञानेन्द्रको छाया त लुकेको छैन रु
बुद्धिजीवी थला पार्ने धम्की दिने, कार्यकर्तालाई अरिांल बन भन्ने, शक्ति आफूमा निहित गर्नेको सफा उद्देश्य हुनै सक्दैन । यो ओलीमार्गले देशको लोकतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ । यी विषयमा नागरिकलाई वेलैमा सचेत पार्न जरुरी छ । बालुवाटार खरिद–बिक्री गर्ने, मार्सी चामल खाने, रिसोर्टमा बिदा मनाउने भ्रष्ट पुँजीवादी कम्युनिस्टसँग समाजवादी कांग्रेस लड्नुपरेको छ ।
कांग्रेसको जागरण अभियानपछि कम्युनिस्ट सरकारको झुटको पुलिन्दा फुट्नेछ । लोकतन्त्रको छायाभित्र ओलीले फलाउँदै गरेको अधिनायकवादलाई निस्तेज गर्नेछ । लोतन्त्र तब मात्र जीवित हुन्छ, जब नागरिकले प्रश्न गर्छन् । सरकारलाई प्रश्न गर्न नपाइने अवस्था छ । अभियानपछि ओली शासनले जनताको प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ । राज्यका हरेक अंगमा गर्न खोजिएको कम्युनिस्टकरण रोकिनेछ । जागरणबाट सत्तामा होस् वा सडकमा, देशको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र रक्षाका लागि लड्ने शक्ति कांग्रेस हो भन्ने स्पष्ट पारिनेछ । साथै कार्यकर्ता पंक्तिमा बलियो विश्वास जगाइनेछ । नयाँ पत्रिकाबाट